မြင်သူတကာ မှင်သက်ငေးမောသွားရတဲ့ မိုးဟေကိုရဲ့ အလှနဲ့ ဖက်ရှင် – Zeekwat Hot News
မြင်သူတကာ မှင်သက်ငေးမောသွားရတဲ့ မိုးဟေကိုရဲ့ အလှနဲ့ ဖက်ရှင်
May 17, 201901890
မိုးဟေကိုက ဒီဇိုင်နာ မင်းသက်စံရဲ့ (၇) နှစ်မြောက် တစ်ကိုယ်တော်ပြသခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲလေးကို သွားရောက်အားပေးခဲ့ပြီး ထိုပွဲလေးကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မိုးဟေကိုရဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင်က ခမ်းခမ်းနားနားနဲ့ ၀င့်ထည်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမဲရောင်အပေါ်မှာ အဖြူရောင်ကျောက်ပွင့်လေးများကို စီထိုးထားတာကြောင့် သူမရဲ့ပွဲတက်ဝတ်စုံက အလွန်စမတ်ကျကာ ပေါ့ပါးကြော့ရှင်းနေခဲ့ပါတယ်။
မိုးဟေကိုက ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံရဲ့ တကိုယ်တော် ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲလေးကို လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်အားပေးခဲ့ရုံသာမက သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှနေလည်း ဂုဏ်ပြုစကားလေး ဆိုခဲ့ပါတယ်။
“မနေ့ညက Designer မင်းသက်စံရဲ့7နှစ်မြောက် Sweet & Smart Haute Couture & Luxury Bridal Fashion Show ပွဲလေးကို သွားရောက်အားပေးဖြစ်တယ် 🎉🎊 အကိုရေ congratulations ပါနော်” ဆိုပြီး မေလ (၁၇) ရက်နေ့က သူမရဲ့လူမှုစာမျက်နှာပေါ်မှာ မျှဝေရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မိုးဟေကိုက အမေနဲ့အတူကိုယ့်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန် ကာလပတ်လုံးဟာအမေများနေ့ပါဘဲ ဆိုပြီး လတ်တလောမှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ ‘အမေများနေ့’ အတွက် အမှတ်တရစကားလေး ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မိုးဟေကိုဟာ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ ကျင်လည်အောင်မြင်လာခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်များစွာရှိခဲ့ပြီးနောက် အသက်အရွယ်အားဖြင့်လည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကြီးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကထက် ပိုပြီးတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာတဲ့ မိုးဟေကိုကို အမျိုးသမီးအမျိုးသားများကပါ သဘောကျလာခဲ့ပါတယ်။
မိုးဟေကိုဟာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ပြီး အနုပညာလုပ်ငန်းများကို အမှားမရှိအောင် လုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်များက အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ခမ်းနားတဲ့ အလှတရားများကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိုးဟေကိုဟာ အချိုးအဆစ်ကျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြန်တာကြောင့် သူမရဲ့ဖက်ရှင်တိုင်းကို ပရိသတ်များက အတုယူလေးစားခဲ့ပါတယ်။
မိုးဟေကိုဟာ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ရုံသာမက ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးများကိုလည်း ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုပါ လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် မိခင်ကို အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတာကြောင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းများမှာ နည်းပါးသွားပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ ပွဲအခမ်းအနားများကို တက်ရောက်ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို ပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source From moe hay ko
မိုးဟကေိုက ဒီဇိုငျနာ မငျးသကျစံရဲ့ (၇) နှဈမွောကျ တဈကိုယျတျောပွသခဲ့တဲ့ ဖကျရှငျရှိုးပှဲလေးကို သှားရောကျအားပေးခဲ့ပွီး ထိုပှဲလေးကို တကျရောကျခဲ့တဲ့ မိုးဟကေိုရဲ့ ပှဲတကျဖကျရှငျက ခမျးခမျးနားနားနဲ့ ဝငျ့ထညျနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ အမဲရောငျအပျေါမှာ အဖွူရောငျကြောကျပှငျ့လေးမြားကို စီထိုးထားတာကွောငျ့ သူမရဲ့ပှဲတကျဝတျစုံက အလှနျစမတျကကြာ ပေါ့ပါးကွော့ရှငျးနခေဲ့ပါတယျ။မိုးဟကေိုက ဒီဇိုငျနာမငျးသကျစံရဲ့ တကိုယျတျော ဖကျရှငျရှိုးပှဲလေးကို လူကိုယျတိုငျသှားရောကျအားပေးခဲ့ရုံသာမက သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှနလေညျး ဂုဏျပွုစကားလေး ဆိုခဲ့ပါတယျ။“မနညေ့က Designer မငျးသကျစံရဲ့7နှဈမွောကျ Sweet & Smart Haute Couture & Luxury Bridal Fashion Show ပှဲလေးကို သှားရောကျအားပေးဖွဈတယျ 🎉🎊 အကိုရေ congratulations ပါနျော” ဆိုပွီး မလေ (၁၇) ရကျနကေ့ သူမရဲ့လူမှုစာမကျြနှာပျေါမှာ မြှဝရေေးသားခဲ့ပါတယျ။မိုးဟကေိုက အမနေဲ့အတူကိုယျ့အသကျရှငျနတေဲ့အခြိနျ ကာလပတျလုံးဟာအမမြေားနပေ့ါဘဲ ဆိုပွီး လတျတလောမှာ ကရြောကျခဲ့တဲ့ ‘အမမြေားနေ့’ အတှကျ အမှတျတရစကားလေး ဆိုခဲ့ပါတယျ။မိုးဟကေိုဟာ မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကမှာ ကငျြလညျအောငျမွငျလာခဲ့တာ ဆယျစုနှဈမြားစှာရှိခဲ့ပွီးနောကျ အသကျအရှယျအားဖွငျ့လညျး တဈနှဈထကျတဈနှဈကွီးလာတာ ဖွဈပါတယျ။ အရငျကထကျ ပိုပွီးတညျငွိမျရငျ့ကကျြလာတဲ့ မိုးဟကေိုကို အမြိုးသမီးအမြိုးသားမြားကပါ သဘောကလြာခဲ့ပါတယျ။မိုးဟကေိုဟာ တညျငွိမျရငျ့ကကျြပွီး အနုပညာလုပျငနျးမြားကို အမှားမရှိအောငျ လုပျကိုငျတတျတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးအဖွဈ ပရိသတျမြားက အသိအမှတျပွုခဲ့ပါတယျ။ ခမျးနားတဲ့ အလှတရားမြားကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မိုးဟကေိုဟာ အခြိုးအဆဈကတြဲ့ ခန်ဓာကိုယျကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားပွနျတာကွောငျ့ သူမရဲ့ဖကျရှငျတိုငျးကို ပရိသတျမြားက အတုယူလေးစားခဲ့ပါတယျ။မိုးဟကေိုဟာ သရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈရုံသာမက ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးမြားကိုလညျး ဦးဆောငျလုပျကိုငျနတေဲ့အပွငျ ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးကိုပါ လုပျကိုငျနတော ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မိခငျရဲ့ကနျြးမာရေးအတှကျ မိခငျကို အနီးကပျပွုစုစောငျ့ရှောကျနရေတာကွောငျ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုအပိုငျးမြားမှာ နညျးပါးသှားပမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ ပှဲအခမျးအနားမြားကို တကျရောကျပေးနတော တှရေ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ သူမ သရုပျဆောငျထားတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားမြားကို ပွနျလညျမွငျတှရေ့တော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
မြန်မာဝတ်စုံပေါ်မှာ ထည်ဝါခန့်ညားတဲ့ ဒေါင်းနီလေးထိုးပြီး တက်ကြွတင့်တယ်နေတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
Hey Buddy!, I found this information for you: "မြင်သူတကာ မှင်သက်ငေးမောသွားရတဲ့ မိုးဟေကိုရဲ့ အလှနဲ့ ဖက်ရှင်". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/956. Thank you.